क्रिकेट खेलाड़ी कुन्दनको ज्यान बचाउन सरकार भन्दा समाज अगाडि, सहयोग संकलन धमाधम – NepalajaMedia
August 2, 2020 109
जनकपुरधाम, १८ साउन । महोत्तरी जिल्लाको फुलहट्टा निवासी कुन्दन सिंहको दुवै मृगौलामा समस्या उत्पन्न भएपछि साथीभाईहरुले आर्थिक सहयोग संकलन गर्दै ६ लाख ६१ हजार ८ सय ९६ रुपैयाँ जुटाएका छन् ।
सरकारले कुन्दनको उपचारमा सहयोग नगरेपछि क्रिकेट खेलाड़ीहरु आफै कुन्दनको ज्यान बचाउंन आर्थिक सहयोग संकलन गर्न थाले । र, जम्मा ६ दिनमा ६ लाख बढ़ी रकम संकलन गरेर आइतबार उपचारमा रहेका कुन्दनलाई संकलित रकम जिम्मा लगाएका छन् ।
धनुषा जिल्ला क्रिकेट संघका उपाध्यक्ष शोभकान्त पांडेय, स्थानीय युवा अनुश पांडेय, भवेश मिश्र, संजय लामा लगायतका दर्जनों युवाहरु संकलित रकम मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीको उपस्थितिमा आइतबार हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
कुन्दन बाल्यकालदेखि नै यो देशका लागि क्रिकेट खेलको माध्यमबाट नाम उच्च राखेकोले तत्काल राज्य पक्षले कुन्दनको ज्यान वचाउन पहल गर्नु पर्ने कोषका अध्यक्ष चौधरीले न्यूज २४ लाई बताउनु भयो ।
कुन्दनको ऊपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च प्रदेश २ सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयले चाहे गर्न सक्ने तर अहिलेसम्म यस विष्यमा सरकार र मन्त्रीलाई ध्यान न जानू दुःखद रहेको बताउनु भयो ।
रकम हस्तान्तरण गर्दै युवा भवेशले आफूहरुले एउटा मानवताको हिसाबले स्वास्फूर्त रुपमा साथीभाईको सहयोगले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सूचना आदान प्रदान गर्दै यो रकम संकलन गरेको स्पस्ट पार्नुभयो ।
को हुन कुन्दन ?
कुन्दन सिंह, राष्ट्रिय क्रिकेटमा चर्चित नाम हो । राष्ट्रियस्तरमा प्रदेश २ को तर्फबाट यू–१९ बाट दर्जनौं क्रिकेट प्रतियोगिता खेलिसकेका छन् उनले । तर, २४ वर्ष नपुग्दै कुन्दनले अहिले जीवन र मृत्यसँग संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ ।
क्रिकेटको क्षेत्रमा राष्ट्रका लागि योगदान दिने धोको बोकेका कुन्दनको मिर्गौलाले काम गर्न छोडेको छ । क्रिकेट मैदानमा घन्किएर दौडिने कुन्दनलाई घरको ओछ्यानमात्र सहारा बनेको छ । निको भएर फेरि मैदानसम्म पुगेर क्रिकेट खेल्ने कुन्दनको धोको अहिले पनि उस्तै छ ।
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका फुलहट्टा घर भएका कुन्दनले सानै छँदा आमा–बाबु गुमाइसकेका छन्। मामाको हेरचाहमा छन् कुन्दन । चिकित्सकले कुन्दनको मिर्गौला फेर्नुपर्ने बताइसकेका छन्। तर, त्यसको लागि आर्थिक अभाव भोग्नुपरेको छ उनले ।
तत्काल डायलासिसमा राखिएको छ उनलाई। साताको दुईपटक डायलासिस गर्न गाउँबाट १२ ÷ १३ किलोमिटर गाडी चढेर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आउनु परिरहेको छ ।
जीवन मृत्युसँग लडाइँ गरिरहेको कुन्दनलाई सहयोग गर्न सरकारले चासो नदिएपछि जिल्ला क्रिकेट संघ धनुषा अघि सरेको छ । जिल्ला क्रिकेट संघले कुन्दनको उपचारका लागि आर्थिक गर्न सबैसँग अपील गरेको छ । र, संघको अपीलपछि अर्थ संकलनको काम पनि अघि बढेको छ ।
यसरी भयो अभियानको सुरुवात
कुन्दन बचाउ अभियानमा जुटेका जनकपुरका युवा भवेश मिश्रले उनको जीवन रक्षार्थ अर्थ संकलन कार्य अघि बढेको बताउनुभयो ।
‘कुन्दनको जीवन रक्षा गर्न सबैभन्दा पहिले पोखराका क्रिकेट अभियन्ता विज्ञान कार्कीले अभियान सुरु गर्नुभयो, उहाँले चन्दा उठाएर आर्थिक सहयोग पठाउनुभयो,’ मिश्रले भन्नुभयो, ‘विज्ञानजीले अभियान सुरु गरेपछि हामीले पनि कुन्दनको जीवन रक्षाका लागि अर्थ जुटाउने अभियान थालेका छौं ।’ विभिन्न क्षेत्र र व्यक्तिबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगपछि हालसम्म आफूहरूले यो रकम संकलन गरेर जिम्मा लगाएको बताउनु भयो ।
छैन चासो प्रदेश सरकारलाई
प्रदेशबाट राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेका कुन्दनको उपचारका लागि प्रदेश सरकारले हालसम्म कुनै चासो देखाएको छैन । आफ्नै गाउँठाउँका प्रतिभाशाली एकजना खेलाडी जीवन र मृत्युसँग लडिरहेका बेला जीवन रक्षाका लागि सरकारले चासो नदेखाएपछि अभियन्ताको मन पिरोलेको छ ।
क्रिकेट संघ धनुषाका उपाध्यक्ष शोभाकान्त पाण्डेयले कुन्दनको उपचारका लागि प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएकोमा गुनासो गर्नुभयो ।
‘प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री महोत्तरीकै छन्, नेपाल क्रिकेट संघका कोषाध्यक्ष रोशन सिंह पनि महोत्तरीका हुन्, प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता पनि महोत्तरीका छन्, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पनि स्वयं खेलाडी रहिसकेका छन्,’ पाण्डेय भन्नुभयो, ‘तर पनि कुन्दनलाई बचाउन कसैले चासो दिएका छैनन्।’ सरकारले चाहे कुन्दनको इलाज सहज हुने पाण्डेयको तर्क छ ।
मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ बाँड्दै हिँड्ने प्रदेश सरकारले जीवित व्यक्तिलाई जोगाउन कुनै सहयोग नगरेको उहाँको भनाइ छ। हालसम्म प्रदेश सरकारले सहयोग नगरे पनि आफूहरू आफ्नो स्तरबाट अर्थ संकलन गरेर कुन्दनको जीवन रक्षार्थ पछि नहट्ने उहाँले बताउनुभयो ।
क कस्ले गरे सहयोग ?
कुन्दन बचाउ अभियानमा हालसम्म स्थानीय निर्माण व्यवसायी दीपेन्द्र ठाकुरले ५० हजार, महोत्तरी गाउ पालिकाको कर्मचारीबाट ३० हजार, शैलेन्द्र यादव (मेयर) लोहरपट्टी नगरपालिका र राहुल पांडेयले २५/२५ हजार रुपैया, भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव साहले २१ हजार लगायतका एक सय भन्दा बढ़ी व्यक्तिले सहयोग गरेका छन ।
Prevकाठमाडौंमा ३१ सहित २४६ नयाँ संक्रमित थपिए, हेर्नुहोस् जिल्लागत अवस्था
Nextआँचलको विवाहा पछीको अनुभब भन्छिन,बिहेपछि अनुहारमा झनै चमक आयो, झनै विन्दास भएकी छु (भिडियो हेर्नुहोस)